i-Ofisi Esekhaya | Eyekhala 2022
IOfisi yasekhaya eyakhelwe kwiiNgcaciso (Isikhokelo soYilo lokuGcina)
Isikhokelo sokugqibela seofisi yasekhaya eyakhiwe ngemibono ngeekhabhathi, ishelfu, iidesika, iishelufa zeencwadi kunye noyilo lwe-DIY. Jonga imifanekiso yesiko elakhelweyo ngaphakathi ukuze uphefumlelwe.
Igalari yemibono yeofisi encinci yasekhaya yamagumbi kubandakanya amagumbi okulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi eliphezulu kunye nekhabethe. Jonga uyilo lweofisi yasekhaya ukwenza indawo esebenzayo
UFeng Shui iOfisi (Iingcebiso zokwandisa indawo yakho yeOfisi)
Iofisi yeFeng Shui inokukunceda ukuba wandise amandla akho kunye nokuba sempilweni ngokubanzi. Fumanisa ukuba ungayenza njani iofisi esebenzayo usebenzisa imigaqo yeFeng Shui ..
Iofisi yasekhaya engaphantsi (Isikhokelo soYilo)
Isikhokelo seofisi esekhaya kubandakanya nokucwangcisa, ukuseta, ukukhanya kunye nemibono yoyilo eyaziwayo. Ujika njani kwigumbi elingaphantsi kwiofisi.
Ukungenazandi kwiOfisi yaseKhaya (Iingcebiso ngoMgangatho, iiMinyango kunye neeNdonga)
Iingcebiso ngendlela yokukhusela isandi kwiofisi yasekhaya kubandakanya ukuba ungasifumana njani isandi kwiingcango kunye nodonga. Amanyathelo okuthintela isandi kwiofisi yakho yasekhaya.
Umgangatho oGqibeleleyo weOfisi yasekhaya
Umgangatho ophezulu weofisi yasekhaya. Jonga imibono yeplanethi enje ngetayile ye-vinyl yokunethezeka, i-vinyl tile edityanisiweyo, ukhuni oluqinileyo, ikhaphethi ebanzi kunye ne-terrazzo.
Iingcebiso zokuseka iofisi yasekhaya yomsebenzi okude kubandakanya izixhobo eziluncedo zokufumana eyona mveliso kwindawo yokusebenza yakho yeofisi.
IOfisi yasekhaya eseKhaya (Isikhokelo soYilo)
Isikhokelo seofisi esekhaya kubandakanya ukucwangcisa, ukuseta, ukukhanya kunye nemibono eyaziwayo yoyilo. Ujika njani kwigumbi elingaphantsi kwiofisi.
Umgangatho ophezulu weofisi yasekhaya. Jonga imibono yeplanethi enje ngetayile ye-vinyl yexabiso eliphantsi, i-vinyl tile edityanisiweyo, ukhuni oluqinileyo, ikhaphethi ye-broadloom kunye ne-terrazzo.
ngowuphi umnwe lo ngumnwe
I-las vegas ukuya kwi-sedona ukuya kwi-canyon enkulu
ukutya komnwe kwitheko lomtshato
izipho zoodade bomthetho
imibala egumbini lokulala
iinwele zomtshato iinwele ezinde